पिँजडाको चरा « Khabarhub
आज विश्वभर शान्तिसहितको मौन अशान्ति छाएको छ । यो पुस्ताका लागि गज्जबको अनुभूति भइरहेको होला अहिले किनकी सबैजना घरभित्र छन् । के यो अशान्तिको शंखनाद भएको हो । मानिसहरुको भीडमा नाँच्ने शान्ती अहिले घरभित्रको एक्लोपना र एकान्तवासमा पनि एकखालको अशान्ति छाएको छ ।
म यहाँ दुई थरिका ढुङ्गा जोड्दैछु, एउटा ढुङ्गा चरालाई लाग्छ अनि चरा ढल्छ, अर्को ढुङ्गा सडकमा लाग्छ अनि सत्ता ढल्छ । हरेक ढुङ्गाहरुमा कैदको आवेग छ, कैदको अन्त छ अनि कैदको शुरुवात छ, मुख्यता हरेक ढुङ्गामा पिँजडाको जोखिम छ अनि एउटा कथा छ । हाम्रो पात्रोको लोकप्रिय अडियो पोडकाष्ट सिरिजका कथाकार । उनले कथा भन्ने श्रृंखला रोकेर गीत लेखनतर्फ लागेका छन् र तयार भएको छ उन्को “पिँजडाको चरा” यससँगै यो गीत देशकै पहिलो ओरिज्नल Acapella कम्पोजिसन पनि बन्न सफल भएको छ ।
“शिरीष फूल भ्रमर चुम्बनमै ओइली झर्छ”, पारिजातको कृतिमाथि साहित्यकार शंकर लामिछानेको यो हाइकुले सम्पूर्ण शिरिषको फूल कृतिलाई नै बाँधेर राखेको छ । यसरी एउटा वाक्यांशमा कथा भनेकी पारिजात झै यस समयका ‘कथाकार’ले चरा, स्वतन्त्रता अनि पिँजडालाई जोडेर गीत कथे, पिँजडाको चरा ।
यो गीत पहिलो पटक मैले कथाकार दाइबाट प्राप्त गर्दा यो प्रश्नवाचक अभिव्यक्तिमा लेखिएको शब्द च्यालेञ्जिङ छ भन्ने कुरामा म तयार थिएँ । दाइलाई गिटारको ट्यूनमा लय भरेर पठाएँ वहाँले मन पराउनुभो । तर जब हाम्रा साउण्ड डिजाइनर सार्दूल श्रेष्ठसँग कामगर्न बसे उसले, “दाई यो गीतलाई एकापेला (Acapella – कुनै पनि वाद्यवादन प्रयोग नगरी मुखबाटै विभिन्न धूनहरु निकाली तयार पारीने सङ्गीतको कठिन विधा) मा गरौं” भन्ने सल्लाह दियो, यो अर्को चुनौति थपियो । त
र जब हामी तीन जना म, सार्दूल तथा आर्टमाण्डूका संस्थापक तथा चलचित्र निर्देशक नविन चौहानसँग यस सम्बन्धमा छलफलका लागि बस्यौं “गरौं, सकिन्छ” भन्ने निश्कर्ष पछि ३ हप्ताको नतिजा हो यो “पिँजडाको चरा” ।
“मज्जा आयो मलाई त, अंकितले पूर्वीय सङ्गीत र मैले पश्चिमी शैलीमा कवितालाई गाउनुपर्ने जानकारी आएसँगै म एक्साइडेट थिएँ । मेरो पहिलो आफ्नै गीत, त्यो पनि नेपालकै पहिलो ओरिज्नल Acapella कम्पोजिसनमा । गाउने भनेपछि शरीरमा खै एउटा बेग्लै खालको उर्जाको सञ्चार हुन थाल्छ । रेकर्डिङ रमाइलो रह्यो । शब्द सुनेरै वाव फिल गरें । हामीसबैले यस गीतलाई एउटा कथा बनाउन मिहिनेत गरेका छौं” प्रथम भ्वाइस अफ नेपालका फाइनलिष्ट गायक सप्तक दुतराजले बताउनुभयो ।
घरको बन्द कोठा भित्र सीमित
कैदमा भन को छ अहिले?
घमण्ड तेरो कता छ अहिले?
कोसँग जोतिदों होस् अहिले?
उदण्डता तेरो कता छ अहिले?
यत्रो कंक्रिट जङ्गलको भन के काम छ अहिले?
अब धर्तीको सुनौं, चुप लागेर धर्तीको सुनौ ।
“गीतमा अहिले विश्व समूदाय र समूदायसँगै यो पृथ्वीले, यो प्रकृतिले विकासका नाममा भोगेको हेपाई तथा करुणा हराएको कथा समेटिएको छ । धर्तिको ब्यथा पोखेको छ, धर्तिको आवाज समेटेको छु ।
प्रकृतिका हरेक जीव, जलचर, चराचुरुङ्गी, किटपतङ खुल्ला आकाशमुनी स्वच्छ हावामा रमाएका छन् भने बन्द कोठाभित्र मानव सभ्यता थुनिएको यथार्त समेटेको छु । अत्ति भएपछि क्षति हुन्छ यही अर्थ समेटिएको छ गीतमा ।
स्वतन्त्र प्रकृति र सृजनाहरुको ताकत हामीले अवमूल्यन गर्दै गयौं, हेप्दै गयौं र प्रकृतिले सहन नसकेपछि उनको प्रतिकारको असर कस्तो हुन्छ यही प्रश्न छ गीतमा । आखिर हामी सबै त्यही प्रकृतिकै एउटा चरा न भएका छौं तर थुनिएका चरा ।
यो गीतले COVID-19 को प्रकोपका कारण प्रारम्भ वैश्विक लकडाउनको सन्दर्भमा मानिसको अहंकारको मजाक उडाउँदछ ।” गीतका रचनाकार तथा हाम्रो पात्रोको लोकप्रिय पोडकाष्ट सिरिज “कथाकार”का प्रस्तुतीकर्ता ‘कथाकार’ सन्तोष देवकोटाले बताए ।
यो धर्तीकाहरुसँगको सम्वाद हो पिँजडाको चरा । गीतमा पृष्ठभूमि लकडाउनको छ अनि सृष्टीपछिका अनन्त कथाहरुको सारसंक्षेप समेटिएको छ । ‘कथाकार’ले गीत पनि लेख्छन्, सुनिहेरौं यो गीत, हेरिहेरौं यो चल्ने तस्वीर, म त भन्छु यो सुन्ने हैन हेर्ने गीत हो, यो बुझाउने हैन मनन गर्ने कथा हो ।
प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०७७, आइतबार २ : ४७ बजे